Taleefan: 86-510-87976997/0086 13861515998
Wakiilka Qurxinta Biyaha
Baahinta tooska ah ee Sebtember ayaa soo socota!
Baahinta tooska ah ee Festifaalka Iibsashada Sebteembar waxaa inta badan ka mid ah soo bandhigidda kiimikooyinka daaweynta biyaha wasakhda ah iyo baaritaanka nadiifinta biyaha wasakhda ah. Waqtiga toosku waa 9: 00-11: 00 am (Waqtiga CN Standard) Sept.2,2021, kani waa xiriirkeena tooska ah https://watch.alibaba.com/v/785bf2f8-afcc-4eaa-bcdf-57930. ..
Wakiilka Kaaliyaha Kiimikada DADMAC ee Daaweynta Biyaha Qashinka Warshadaha
Salaan, kani waa soo -saare kiimiko nadiif ah oo ka socda Shiinaha, diiradeena ugu weynna waxay tahay hagaajinta wasakhda bullaacadaha. Aan soo bandhigo mid ka mid ah badeecadaha ugu waaweyn ee shirkaddayada-DADMAC. DADMAC waa daahir sare, isku darka, cusbada ammonium quaternary iyo monomer cationic cufnaanta sare. Muuqaalkiisu waa col ...
Kulanka daraasadda ee Wakiilka Ka -qaadista Birta culus
Maanta, waxaan qabanqaabinnay kulan barashada badeecadda. Daraasaddan ayaa inta badan loogu talagalay badeecadda shirkadeena loo yaqaan Agent Removal Metal Agent. Waa maxay nooca layaabka leh ee badeecadani leedahay? Cleanwat cW-15 ma aha mid sun ah oo bey'ada u fiican oo qabata biraha culus. Kiimikadaan waxay abuuri kartaa co ...
Rinjiga Shiinaha Mist Coagulating Ab Agent
Iskuduwaha Cleanwat ee ceeryaanta rinjiga (rinjiga ceeryaanta rinjiga) ayaa loo adeegsadaa daaweynta biyaha wasakhda ah Waxay ka kooban tahay wakiilka A & B. Agent A waa nooc ka mid ah kiimiko daaweyn khaas ah oo loo isticmaalo in laga saaro dheecaanka rinjiga. polymer. Marka lagu daro biyo dib -u -habeyn ...
Shiinaha Poly Dadmac
Waxaan bixin karnaa alaab tayo sare leh, qiimo tartan iyo adeegga macmiilka ugu fiican. Meesha aan u soconno waa “Waxaad halkan ku timaaddaa si dhib leh waxaanan ku siinnaa dhoollacaddeyn aad ku qaaddo” Sannadkii 2019 naqshaddii ugu dambaysay china poly dadmac ee daaweynta biyaha ee kiimikooyinka waraaqaha ah, soo dhawow rajooyinka adduunka oo dhan si aad u hesho ...
Sida Loo Doorto Polyaluminium Chloride Daaweynta biyaha
waa maxay chloride polyalium? Polyaluminum Chloride (Poly aluminium chloride) ayaa ka gaaban PAC. Waa nooc ka mid ah kiimikada daaweynta biyaha ee biyaha la cabbo, biyaha warshadaha, biyaha wasakhda ah, nadiifinta biyaha dhulka hoostiisa si looga saaro midabka, ka saarista COD, iwm falcelin ahaan.
Kulan waxbarasho oo ku saabsan ceeryaanta rinjiga
Dhawaan, waxaan qabanqaabinnay kulan wadaag wadaag, kaas oo aan si nidaamsan u barannay qulqulka ceeryaanta rinjiga iyo alaabo kale. Qof kasta oo wax iibiya oo goobta joogay ayaa si taxaddar leh u dhegeystay oo wax ka qortay, isagoo sheegay inay wax badan heleen. Aan ku siiyo hordhac kooban badeecadaha biyaha nadiifka ah—— C ...
Falanqeynta Juun Faa'iido Weyn Live Live
Waad salaaman tihiin dhammaan, tani waxay soo saareysaa kiimikooyinka biyaha nadiifka ah. ltd. Juun 21, 2021, laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 11ka aroornimo waqtiga Shiinaha, waxaan yeelan doonnaa baahin toos ah oo cajiib ah. Mawduucayaga baahinta tooska ah wuxuu ku saabsan yahay dallacsiin weyn bisha Juun. Soo saaraha kiimikada ayaa sameeya faa'iidada ugu weyn.Wet Decoloring Agent + PAM = Dhimis Dheeraad ah ...
nadiif ah wat polyamine jumlada
Badeecadani waa polymer cationic dareere ah oo leh culeys keli ah oo si hufan ugu shaqeeya sida coagulants-ka koowaad oo ka qaata wakiilada dhex-dhexaadinta hababka kala-sooca dareeraha adag ee warshadaha kala duwan. Waxaa loo isticmaalaa daawaynta biyaha iyo warshadaha waraaqaha. Waxaa inta badan loo isticmaalaa follo ...
cleanwat wuxuu kuu soo dirayaa warqad casuumaad ah - Bandhigga Biyaha Caalamiga ah ee 14aad ee Shanghai
Bishii Juun 2, 2021, Bandhigga Biyaha Caalamiga ah ee 14 -aad ee Shanghai ayaa si rasmi ah u furmay. Cinwaanku wuxuu ku yaal Xarunta Shirarka iyo Bandhigga Qaranka ee Shanghai. Tirada waab ee shirkadeena —— Yixing Chemicalwater Chemicals Co., Ltd. waa 7.1H583. Waxaan si kal iyo laab ah kuugu martiqaadeynaa inaad kaqaybqaadato. Alaabooyinka hore ...
Sii -daynta Badeecadda Cusub — Qiimo Wanaagsan iyo Tayo -xumada
1. Defoamer -ku wuxuu ka kooban yahay polysiloxane, polysiloxane wax laga beddelay, cusbi silikoon, kaarboon madow madow, wakiilka kala firdhiya iyo dejiye, iwm. 2. Marka la isku uruuro hooseeyo, waxay ilaalin kartaa saamaynta xakamaynta xumbo wanaagsan. 3. Waxqabadka xakamaynta xumbo ayaa caan ah 4.Easi ...
Ogeysiiska Bandhigga Shanghai
Shirkaddayadu waxay ka qaybqaadan doontaa Bandhigga Deegaanka 22aad ee Shiinaha (IE expo China 2021), Cinwaanka iyo waqtiga waa Shanghai Expo International Expo Center Abriil 20-22. Hoolka ： W3 Booth ： Maya. L41 Si kal iyo laab ah u soo dhawee qof walba. AOUT EXPO IE expo Shiinaha wuxuu bilaabmay 2000. Iyadoo in ka badan 20 sano oo warshaduhu ...